angiotensin II receptor blockers (ARBs) နှင့်သူတို့၏အသုံးပြုမှုနှင့်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ - မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေးပညာရေး နှိပ်ပါ ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ, သတင်း ကုန်ပစ္စည်း ရပ်ရွာ၊ သတင်း၊ ကျန်းမာရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ပြင်းထန်သောအားကစား
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း >> Angiotensin II receptor blockers (ARBs) - အသုံးပြုခြင်း၊ ဘုံအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
Angiotensin II receptor blockers (ARBs) - အသုံးပြုခြင်း၊ ဘုံအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း Angiotensin II receptor blockers (ARBs) သည်သွေးတိုးနှင့်နှလုံးပျက်ခြင်းကိုကုသသည်။ ARB အမျိုးအစားများနှင့်သူတို့၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ARBs စာရင်း | ARB ဆိုတာဘာလဲ။ | သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ကြသလဲ | အသုံးပြုသည် | ARBs ကိုဘယ်သူယူနိုင်မလဲ။ | ဘေးကင်းရေး | ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး | ကုန်ကျစရိတ်
သွေးပေါင်ချိန်သည်သန်းနှင့်ချီသောအမေရိကန်များအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောဘုံကျန်းမာရေးအခြေအနေဖြစ်သည်။ Angiotensin II receptor blockers (ARBs) များသည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချရန်အသုံးပြုသောဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၎င်းအခြေအနေသည်ဆရာဝန်များညွှန်ကြားမည့်ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်ထိရောက်ပြီးဆယ်စုနှစ်များစွာသွေးပေါင်ချိန်ကိုမြင့်တက်စေရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ARBs ကိုအခြားနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါအမျိုးအစားများကိုလည်းကုသရန်အသုံးပြုသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ဤဆေးဝါးအမျိုးအစားကိုခြုံငုံသုံးသပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယေဘူယျအမည်များကိုစာရင်းပြုမည်၊ သူတို့၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးမည်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်၊
တံဆိပ်အမည် (ယေဘုယျအမည်) ပျမ်းမျှငွေသားစျေးနှုန်း SingleCare ငွေစု ပိုမိုသိရှိရန်
တိုက်ခိုက်ခြင်း (candesartan) 30 ကိုနှုန်း $ 127, 16 မီလီဂရမ်ဆေးပြား candesartan ကူပွန်ကိုရယူပါ Candesartan အသေးစိတ်ကို
Avapro (irbesartan) 30 ကိုတစ် ဦး လျှင် $ 104, 300 မီလီဂရမ်ဆေးပြား irbesartan ကူပွန်ကိုရယူပါ Irbesartan အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ဘီနစ်ကာ (olmesartan) 30, 20 မီလီဂရမ်ဆေးပြားနှုန်း $ 182 Olmesartan ကူပွန်ကိုရယူပါ Olmesartan အသေးစိတ်ကို
ကော့ဇာ (လက်စတာ) 30 ကိုနှုန်း $ 98, 50 မီလီဂရမ်ဆေးပြား losartan ကူပွန်ကိုရယူပါ Losartan အသေးစိတ်ကို
Diovan (valsartan) 30 ကို $ 234, 320 မီလီဂရမ်ဆေးပြား valsartan ကူပွန်ကိုရယူပါ Valsartan အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Micardis (telmisartan) 30 ကိုနှုန်း $ 170, 20 မီလီဂရမ်ဆေးပြား telmisartan ကူပွန်ကိုရယူပါ Telmisartanicardis အသေးစိတ်ကို
အခြား ARB များ
ARB ဆေးများသည်တစ်နေ့လျှင်လူနာများသောက်သည့်ဆေးပမာဏကိုလျှော့ချရန်အတွက် diuretic သို့မဟုတ် calcium channel blocker ကဲ့သို့သောအခြားဆေးဝါးများနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ အောက်တွင်ဥပမာအချို့ကိုဖော်ပြထားသည် -
Exforge (valsartan နှင့် amlodipine)
Avalide (irbesartan နှင့် hydrochlorothiazide)
Azor (olmesartan နှင့် amlodipine)
Twynsta (telmisartan နှင့် amlodipine)
Hyzaar (losartan နှင့် hydrochlorothiazide)
Diovan HCT (valsartan နှင့် hydrochlorothiazide)
Benicar HCT (olmesartan နှင့် hydrochlorothiazide)
Micardis HCT (telmisartan နှင့် hydrochlorothiazide)
angiotensin II receptor blockers (ARBs) ဆိုတာဘာလဲ။
Angiotensin II အဲဒီ receptor blockers - သို့မဟုတ်အတိုကောက် ARBs - မြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်ကိုကုသရန်အသုံးပြုသောဆေးဝါးအမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ARB များအားလုံးသည်သွေးတိုးခြင်းကိုကုသရန် FDA မှအတည်ပြုထားသော်လည်းအချို့သော ARB များသည်နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချိုနှင့်ဆက်စပ်သောကျောက်ကပ်ရောဂါ (သို့) နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များကိုကာကွယ်ရန်စသည့်အခြားလက်တွေ့အခြေအနေများတွင် FDA ၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသည်။ ARBs များကိုပုံမှန်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားပြီး ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များကတည်းကအသုံးပြုခဲ့သည်။
Renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) ဟုခေါ်သောဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကို အသုံးပြု၍ ခန္ဓာကိုယ်သည်သွေးပေါင်ချိန်နှင့်အသံပမာဏကိုထိန်းညှိပေးသည်။ ဒီစနစ်ကကျောက်ကပ်ကိုသွေးကြောများနှင့်အခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများသို့အချက်ပြစေပါတယ်။ ကျောက်ကပ်မှာ Renin လို့ခေါ်တဲ့ပရိုတင်းတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်တယ်။ ဒီပရိုတိန်းဟာသွေးပေါင်ချိန်၊ pituitary glands နဲ့ adrenal glands တွေကိုသွေးဖိအားနဲ့သွေးပမာဏကိုတိုးစေတဲ့ angiotensin II လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ဖို့အသုံးပြုပါတယ်။
ဒီဆေးတွေ ARB တွေဝင်လာတယ်။ ဒီဆေးတွေက angiotensin II ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဟန့်တားတဲ့အတွက်ဒီဟော်မုန်းကတခြားအင်္ဂါတွေနဲ့မဆက်သွယ်နိုင်ဘူး။ ထို့ကြောင့် ARB များသည်သွေးပေါင်ချိန်နှင့်သွေးပမာဏကိုမြင့်တက်စေသည်။
ARBs သည်အခြားသွေးဖိအားပေးသောဆေးတစ်မျိုးနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACE inhibitors) သည်တိုတောင်းသောအတွက် RAAS စနစ်ကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သည်။ သို့သော် ACE inhibitors များသည်အစောပိုင်းအချက်ပြဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းတွင်ဆက်သွယ်မှုကိုပျက်ပြားစေပြီးဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများပိုမိုများပြားစေသည်။ ARBs များသည်ကက်စကိတ်တွင်အနှောင့်အယှက်ပေးပြီးသွေးပေါင်ချိန်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ပိုမိုတိကျသောအချက်ပြမှုကိုပိတ်ပင်ထားသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် ARB များသည် ACE inhibitors နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းသည်။
ARB များအားလုံးကို FDA ကအတည်ပြုသည် သွေးတိုးရောဂါ ။ losartan, candesartan နှင့် valsartan တို့ကဲ့သို့သော ARB အချို့သည်နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို FDA ကအတည်ပြုသည်။ နှလုံးပျက်ကွက် ။ သီးခြား ARB များတွင် FDA မှအတည်ပြုထားသောအခြားလက္ခဏာများရှိသည်။
myocardial infarction (နှလုံးရောဂါ) ပြီးနောက်လက်ဝဲ ventricular ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလူနာများတွင် CV CV များကာကွယ်ခြင်း
ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဆီးချိုရောဂါ (proteinuria / microalbuminuria)
လက်ဝဲ ventricular hypertrophy
အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် ARBs များအတွက်ညွှန်ပြထားသော FDA ၏အတည်ပြုချက်ကိုအကျဉ်းချုံးထားသည်။
ညွှန်ပြ အသုံးပြုရန်အတွက်အတည်ပြု ARBs
သွေးတိုးရောဂါ ARB အားလုံး
နှလုံးပျက်ကွက် Candesartan, valsartan
လက်ဝဲ ventricular hypertrophy Losartan, losartan-hydrochlorothiazide
ဆီးချိုရောဂါကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကျောက်ကပ်ရောဂါ Losartan, irbesartan
ARBs ကိုအခြားလက်တွေ့အခြေအနေများတွင် - ဥပမာ -
ကွဲပြားခြားနားသော ARBs အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောဂုဏ်သတ္တိများပြ။ ဤအကြောင်းကြောင့်အချို့ ARBS များသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများအတွက်ပိုမိုအသုံးဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, candesartan ရှိပါတယ် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းကာကွယ်ခြင်းအတွက်ထိရောက်မှုကိုသရုပ်ပြခဲ့သည် ယင်း၏ lipophilic ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်ဖြစ်သည်။
ARBs များစွာကိုအခြေအနေတစ်ခုအတွက်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်းလူနာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်၍ တိကျစွာ ARB များလိုအပ်နိုင်သည်။ ဥပမာ - losartan သည် hyperuricemia ရှိသည့်လူနာများအတွက် ARB ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး၊ candesartan, olmesartan နှင့် valsartan သည်ဤအခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးဝါးစေနိုင်သည်။ အချို့သော ARB များသည်အချို့သောလက်တွေ့အခြေအနေများအတွက်အခြားသူများထက် ပိုမို၍ ဦး စားပေးနိုင်ပါသည်။ Losartan သည်လေဖြတ်ရန်မြင့်မားသောသွေးတိုးရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက်ပထမအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး၌၊ လူနာတစ် ဦး အတွက်အကောင်းဆုံး ARB ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်သည်။
ARB ဆေးများစွာသည်ကလေးငယ်များအတွက်သွေးတိုးရောဂါကိုကုသရန်အတွက်ထိရောက်မှုရှိသည်။ Losartan, valsartan နှင့် olmesartan သည် FDA ၏ခွင့်ပြုချက်ကို ၆ နှစ်အထက်ကလေးများအတွက်အသုံးပြုသည်၊ candesartan သည်တစ်နှစ်အထက်ကလေးများအတွက်ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသည်။ အမျိုးသားကျောက်ကပ်ဖောင်ဒေးရှင်းအဆိုအရဒီဆေးတွေ CKD ၏တိုးတက်မှုနှေးကွေးဖို့အေးဂျင့်ဖြစ်နိုင်သည် ကလေးများအတွက်။ ဤလူ ဦး ရေ၏လုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်အချက်အလက်များအကန့်အသတ်ရှိသော်လည်းအခြား ARB မ်ားကိုကလေးများအားအမှတ်အသားပြုထားသည်။ ကလေးငယ်များအတွက် ARBs ကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာနှင့်ထိရောက်စွာအသုံးပြုရန်အသက်နှင့်အလေးချိန်ပေါ် မူတည်၍ ဆေးချိန်ညှိရန်လိုအပ်သည်။
ARBs များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်လူကြီးများအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက်လုံခြုံပြီးထိရောက်သောအရာများဖြစ်သည်။ အသုံးများသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာအသေးအဖွဲများဖြစ်ပြီးမူးဝြေခင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အချို့သောလူနာများသည်ခံနိုင်ရည်နည်းသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရနိုင်သည် အရေးကြီးသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်တိုင်ပင်ရန်အရေးကြီးသည်၊ သို့မှသာကုသမှုကိုအလိုက်သင့်ပြုပြင်နိုင်သည်။
ARBs များသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများလူနာများနည်းတူသက်ကြီးရွယ်အိုလူနာများနည်းတူလည်းထိရောက်မှုရှိသည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်ကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသမှုခံယူသောလူနာအများစုနှင့် ARB များသည်ကျောက်ကပ်ရောဂါတိုးတက်မှုနှေးကွေးခြင်းဖြင့်သိသာသောအကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်သည်။ ARBs သောက်နေသည့်သက်ကြီးရွယ်အိုများလူနာများတွင်သိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုမှာသွေးရည်ကြည်ပိုတက်စီယမ် (hyperkalemia) ဖြစ်သည်။ ဤလူနာလူ ဦး ရေအတွက်သွေးရည်ကြည်ပိုတက်စီယမ်ကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်လေ့လာရန်အကြံပြုထားပါသည်။
ARB ဆေးသောက်နေတဲ့အသည်းရောဂါရှိတဲ့လူနာတွေကနည်းနည်းလေးနဲနဲထိုးရမယ်။ losartan ၏စတင်ဆေးသည်အသည်းချို့တဲ့သောလူနာများအတွက် ၂၅ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ ကြောင်းထက်ဝက်ပုံမှန်အကြံပြုစတင်စတင်ထိုးသည်။ Candesartan အတွက်အထုပ်ထည့်ခြင်းသည်အသည်းရောဂါရှိသူများအတွက်ပုံမှန်စတင်ထက်ဝက်ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ ARBs များသည်အဓိကအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှအသည်းမှဖယ်ထုတ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်လူနာလူ ဦး ရေတွင်ဆေးနည်းသောပမာဏမှ စတင်၍ ဂရုတစိုက်တိုးမြှင့်ရန်အရေးကြီးသည်။
NMBA အရောအနှောများကြောင့် valsartan, losartan နှင့် irbesartan ပါဝင်သည့်ထုတ်ကုန်များကိုဖြန့်ချိသူအမြောက်အများကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုများကို ၂၀၁၈ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်စာနယ်ဇင်းကြေငြာချက်များ ဤပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ FDA ကအွန်လိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသည် ပြည့်စုံသောစာရင်း ARB ဆေးများပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်ထုတ်ကုန်အားလုံး၏။ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုကြောင့်ထိခိုက်သောဖြန့်ဖြူးသူများတွင် Teva၊ Macleods, Mylan, Torrent, Aurobindo, Solco Healthcare, Prinston နှင့် Camber ဆေးဝါးများပါ ၀ င်သည်။ သင်၏ဆေးဝါးကုသမှုသည်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်ပြrelatedနာများကိုကူညီနိုင်သည် ပြန်ခေါ်ဆေးများ။
မည်သည့်ဆေးပါ ၀ င်မှုတွင်မဆို hypersensitivity (သိသိသာသာ) ရှိပါကမည်သည့် ARB ဆေးကိုမသောက်ပါနှင့်။
ARB များကိုဆိုဒီယမ်နိမ့် (hyponatremia) နှင့်ပိုတက်စီယမ်အဆင့် (hyperkalemia) အပါအ ၀ င် electrolyte မညီမျှမှုရှိသည့်လူနာများတွင်သတိဖြင့်အသုံးပြုသင့်သည်။ ARB များသည်ဤမညီမျှမှုများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည် ဆိုဒီယမ် retention ကိုလျှော့ချ ကျောက်ကပ်၏ Proximity နှင့် distal tubules မှာနှင့် စုဆောင်းခြင်းပြွန်အတွက်ပိုတက်စီယမ်လျှို့ဝှက်ချက်လျော့ကျလာ ။
ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ stenosis (RAS) ဟုလူသိများသောလူနာများသည်ကျောက်ကပ်နှစ်ခုလုံးတွင်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်လုပ်သောကျောက်ကပ်တစ်ခုနှင့် RAS ရောဂါရှိသည့်လူနာများ - ARBs ကိုမသောက်သင့်ပါ။ ARB များသည်ကျောက်ကပ်အတွင်းသွေးလည်ပတ်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သည့်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာရောဂါဝေဒနာသည်များ၏ glomerular filtration နှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုဆိုးဝါးစေပြီးကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။
အလားတူစွာ၊ ARB ဖြင့်ကုထုံးမစတင်မီလူနာများအနေဖြင့်ပမာဏလျော့နည်းသွားခြင်းကိုပြုပြင်သင့်သည်။ လူနာတစ် ဦး အသံအတိုးအကျယ်ကုန်ခမ်းသောအခါ, ကျောက်ကပ် '' filtration မှုနှုန်း angiotensin II ကိုအပေါ်အလွန်အမင်းမှီခိုသည်, ဒီပြည်နယ်အတွက်ယူသောအခါအရှင် ARBs နောက်ထပ်ကျောက်ကပ် function ကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောလိမ့်မည်။
ARE ကို ACE inhibitors သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက် renin-inhibitors (DRI) ကိုအသုံးပြုသောလူနာများမှမသောက်သင့်ပါ ekt (aliskiren) ။ ဆေးသုံးမျိုးစလုံးသည် renin-angiotensin system ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကြပြီး၎င်းတို့ကိုအတူတကွသောက်ခြင်းသည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှု၊ hyperkalemia နှင့် hypotension များ၏အန္တရာယ်ကိုပိုမိုဆိုးဝါးစေသည်။ အန္တရာယ်ရှိသောမူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်သင်သောက်နေသည့်ဆေးဝါးများအားလုံးကိုသင့်ဆရာဝန်သိရှိထားကြောင်းသေချာပါစေ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်သို့မဟုတ်နို့တိုက်နေစဉ် ARB ဆေးများကိုသောက်နိုင်ပါသလား။
ARB သောက်ခြင်းကိုရပ်ပါ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်သည်ဟုသင်သံသယရှိလျှင်ဆရာဝန်နှင့်ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နှင့်နို့တိုက်နေစဉ် ARB များကိုရှောင်သင့်သည်။ ARB ဆေးများအားလုံးသည် ARB ဆေးများကိုကိုယ် ၀ န်ဆောင်ချိန်တွင်သန္ဓေသားအားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသို့မဟုတ်သေစေနိုင်သည့်အကြောင်းသတိပေးထားသောသေတ္တာငယ်တစ်ခုပါရှိသည်။
ARBs သည်အရာ ၀ တ္ထုများကိုထိန်းချုပ်ပါသလား။
မဟုတ်ပါ၊ angiotensin II receptor antagonists များသည်ထိန်းချုပ်သောပစ္စည်းများမဟုတ်ပါ။
အဖြစ်များသော ARB ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
ARB များသောက်နေစဉ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်မှာအောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။ ARB အားလုံးတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုသာဖုံးကွယ်ထားသည့်အတွက်၎င်းသည်ပြည့်စုံသောစာရင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ အပိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်ဤအတန်းအတွင်းရှိဆေးဝါးတစ်မျိုးတည်းအတွက်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာသို့မဟုတ်သည်းမခံနိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုတွေ့ကြုံခံစားရပါကနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အကြံဥာဏ်များအတွက်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ARBs များသည် angioedema ဟုခေါ်သောပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းလူသိများကြသည်။ ACE inhibitors များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ARBs တွင်ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှာမများပါ။ ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသည်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော vasodilating peptide bradykinin ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ ARB များသည် bradykinin ကို ACE inhibitors ကဲ့သို့အဆင့်သို့မတိုးပါ။
ဒီအတန်းထဲမှမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုယေဘူယျအနေဖြင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ, ဘီနင် ရက် ၃၀ ထောက်ပံ့ရေးအတွက်ဒေါ်လာ ၃၀၀ အထက်ကုန်ကျနိုင်သည်။ ယေဘူယျဗားရှင်း olmesartan ကိုဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာအောက်နှင့်ရရှိနိုင်သည် SingleCare ကူပွန်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ARBs များစွာသည်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ထက်များသော်လည်းယေဘူယျဗားရှင်းများသည်ပုံမှန်အားဖြင့် SingleCare မှတဆင့်ဒေါ်လာ ၃၀ အောက်သာရှိသည်။
ARB များသည် Medicare နှင့်အာမခံအစီအစဉ်အများစုတွင်အကျုံးဝင်သည်။ သို့သော်အချို့သော ARB များသည်အခြားသူများထက် ပို၍ ဦး စားပေးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် losartan ကိုပုံမှန်အားဖြင့် Tier 1 ဆေးအဖြစ်သတ်မှတ်သည် - သို့မဟုတ်ပိုနှစ်သက်သောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနေစဉ် - candesartan-hydrochlorothiazide ကဲ့သို့သောပေါင်းစပ်ဆေးများကိုလုံး ၀ ဖုံးအုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်သင်၏အာမခံအစီအစဉ်သည်လူနာ၏ဆေးညွှန်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်ရောဂါအပေါ် အခြေခံ၍ လွှမ်းခြုံမှုကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ သွေးတိုးရောဂါသည်ရောဂါကုသရန်ခိုင်လုံစေရန်အများဆုံးရောဂါဖြစ်သည်။
အာမခံအစီအစဉ်သည်သင်၏ဆေးဝါးများကိုအကာအကွယ်ပေးသည့်တိုင်၊ SingleCare ကူပွန် ။
ယေဘုယျ angiotensin အဲဒီ receptor blockers ၏ခြုံငုံသုံးသပ် , အိမ်။ ဆေးဆိုင်
အခြားကြိုတင်ကာကွယ်ရေး Anti-Migraine ကုသမှု: ACE inhibitors, ARBs, calcium channel blockers, serotonin ရန်နှင့် NMDA receptor antagonists , အာရုံကြောအတွက်လက်ရှိကုသမှုရွေးချယ်စရာများ
သန်း ၁၀၀ ကျော်မှာအမေရိကန်တွေမှာသွေးပေါင်ချိန်များတယ် အမေရိကန်နှလုံးရောဂါအသင်း
ARB နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောကုထုံးရွေးချယ်မှု။ ဘယ်ပေးမလဲ ဘယ်တော့လဲ? အဘယ်ကြောင့်? , နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဆေးဝါးများ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်
နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါအတွက်သွေးပေါင်ချိန်၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် KDIGO 2021 လက်တွေ့အလေ့အကျင့်လမ်းညွှန်ချက်များ , ကျောက်ကပ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
အရွယ်ရောက်သူများအတွက် Episodic Migraine ကိုကာကွယ်သည့်ကုသမှုတွင် Angiotensin-converting enzyme inhibitors နှင့် angiotensin receptor blockers တို့၏ထိရောက်မှု , လက်ရှိနာကျင်မှုနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းအစီရင်ခံစာများ
ဆီးချိုရောဂါရှိသက်ကြီးရွယ်အိုလူနာများတွင် angiotensin II receptor blockata ၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှု၊ အမေရိကန်ဆီးချိုရောဂါအသင်း
Angiotensin receptor blockers များသည် tubular ဆိုဒီယမ် reabsorption ကိုဖိအားပေးခြင်းဖြင့် circadian circadian rhythm ပြောင်းလဲသည် , ဇီဝကမ္မဗေဒ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်
angiotensin-converting အင်ဇိုင်း inhibitors နှင့် angiotensin အဲဒီ receptor blockers နှင့်ဆက်စပ် Hyperkalemia , နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကုထုံး
နှလုံးရောဂါနှင့်နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါတို့တွင် Angiotensin-converting အင်ဇိုင်း inhibitors နှင့် receptor blockers - ပြတ်ပြတ်သားသားအငြင်းပွားစရာများ - အိန္ဒိယနှလုံးဂျာနယ်
Walmart သည် opioid ဆေးညွှန်းမူဝါဒအသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
Lyme ရောဂါအတွက် doxycycline monohydrate vs hyclate